Iko Vermont Kubatsira Vechidiki Kurega Kuumba - 802Quits
Batsira Kumisa Vechidiki Kuumba
KUBATSIRA VECHIDIKI ZVESE ZVINONYANYA VERMONT STOP VAPING
802Quits ndeyekutsvagisa-kwakavakirwa sevhisi kubva kuVermont Dhipatimendi Rehutano iyo inogona kubatsira mwana wako ari kuyaruka kubudirira kusiya vaputa.
Kwemakore angangoita makumi maviri, iyo Vermont Quitline yakabatsira zviuru zveVermonters kurova nicotine kupindwa muropa. Zvakafanana nedhiragi kupindwa muropa, kuputa kupindwa muropa kunonetsa kukunda, asi nerutsigiro, mwana wako ari kuyaruka anogona kumira kuputika otanga kubudirira.
Kutaura nemwana wako achiri kuyaruka nezve kuputa kupindwa muropa kunogona kuoma, asi isu tiri pano kuzobatsira.
Kuvandudza mikana yemwana wako yekurega, zvakakosha kutora matanho nekukurumidza. Bata yakadzidziswa nicotine Kurega Kochi ikozvino kuti mibvunzo yako ipindurwe, dzidza zvakawanda nezvechirongwa chedu uye ubatsire wako wechidiki kugadzirira kurega kupenga.
Ziva Zviratidzo zveKupindwa muropa
50% yevechidiki veVermont vaedza vape.¹
Uri kuona shanduko mumafungire emwana wako here kana chishuwo? Kutsvaga macartridge uye zvishandiso zvausingazive?
Zviratidzo zveVechidiki Nicotine Kupindwa muropa:
Kusanyanya kufarira zviitiko
Boka idzva reshamwari
Kuwedzera kwekuda kwemari
Kana iwe ukapindura "hongu" kune chero mumwe wemibvunzo iyi, mwana wako ari kuyaruka anogona kunge aine nicotine kupindwa muropa, uye zvakakosha kuti uvatsvage rutsigiro rwavanoda.
¹2019 Vermont Vechidiki Njodzi Yekuita Maitiro Ongororo
Iwe neMucheche Wako Hamusi Moga
1 mu4 Vermont vechidiki vapera mumwedzi wapfuura
Iyi nhamba inotyisa nekuda kwekukanganisa nicotine kunogona kuve pahutano hwemwana wako. Mwana wako ari kuyaruka anogona kufunga kuti kufema kuri nani pane kuputa, asi vape aerosol inogona kunge iine akawanda semakumi matatu nemasere emakemikari akasiyana anogona kuvaka mumapapu ako nekufamba kwenguva, zvichikonzera vechidiki kurwara, kana kutonyanya.
Nekudaro, iwe haufanire kusangana nedambudziko remhepo uri wega. Vabereki pano nekune dzimwe nyika dzeUS vari kuwana rutsigiro kubva kuneshumiro senge 802Quits. Chikwata chedu chakadzidziswa chehunyanzvi uye nzira dzakaratidzwa dzinogona kubatsira kupa vechidiki chivimbo uye maturusi avanoda kurova chikakananda kupindwa muropa nezvakanaka.
Nicotine Kupindwa muropa Hakusi Kukanganisa Kwemwana Wako
Vhepesi haigadzi isina mhute yemvura isingakuvadzi. Iwo azere neicotine inodhakwa zvakanyanya — uye imwe vape pod inogona kuva neyakaenzana sepakiti rese remidzanga.
Vazhinji vechidiki havazive vapes ane nicotine uye nenguva yavanoda kumira, zvanonoka. Ivo vakapindwa muropa.
Uropi hwevechiri kuyaruka huchiri kukura, saka kuratidzwa kune iyo nicotine mune vapes kunogona kukonzera kukuvadza kwenguva refu nekushandura iyo masisitimu ehuropi. Izvi zvinogona kushandura zvechigarire kutarisisa kwemwana wako uye kugona kudzidza. Kutora chiito nekukurumidza uye kudyidzana nemwana wako kuyaruka kuti vagadzire yakagadzirirwa chirongwa ndiko kwakakosha mukuvabatsira kumira.
Tora Chiito nekukurumidza
Pasina rubatsiro, kupindwa muropa kunogona kuwedzera. Nekudaro, iwe unogona kutora matanho ekuchengetedza ramangwana rako repwere rakajeka.
802Quits zvakavanzika uye zvine shanduko, 24/7 rutsigiro kukodzera mararamiro emhuri yako akabatikana.
Bata yedu yakadzidziswa nicotine Siya Varairidzi kuti ugadzire yakasarudzika-yakagadzirirwa zano uye yakasarudzika kurega chirongwa chevechiri kuyaruka.
Hupenyu Hwangu, Kurega Kwangu ™ ibasa remahara uye rakavanzika kune avo vane makore gumi nemanomwe kusvika gumi nemanomwe vanoda kusiya fodya nehupenyu.
Hupenyu Hwangu, Kurega Kwangu ™ inopa zviwanikwa kuvabereki vanoda kutora chinhanho mukushanya kwekuyaruka kwevechidiki. Vatori vechikamu vanogamuchira:
Kuwanika kweFodya Kupedza Varairidzi vane hunyanzvi hwekudzidziswa mukuyaruka kwefodya kudzivirira.
Zvishanu, imwe-on-one yekudzidzisa zvikamu. Kudzidzisa kunobatsira vechidiki kukudziridza chirongwa chekusiya, kuona zvinokonzeresa, kudzidzira hunyanzvi hwekuramba uye kugamuchira rutsigiro rwunoramba ruripo rwekuchinja maitiro